Somalia: Wararkii u dambeeyey Dagaalka Beledxaawo oo lagu kala Calaf-qaaday iyo Kenya oo Badheedhaheeda Dhiibatay - SomalilandPost
Home News Somalia: Wararkii u dambeeyey Dagaalka Beledxaawo oo lagu kala Calaf-qaaday iyo Kenya...
Somalia: Wararkii u dambeeyey Dagaalka Beledxaawo oo lagu kala Calaf-qaaday iyo Kenya oo Badheedhaheeda Dhiibatay
Kismaayo (SLpost)- Dagaal xooggan oo hubka noocyadiisa kala duwan laysu adeegsaday, ayaa subaxnimadii hore ee saaka ka qarxay degmada Beled-xaawo ee gobolka Gedo oo ka tirsan Maamul-goboleedka Jubbaland ee Soomaaliya.
Dagaalkan ayaa dhexmaray Ciidamo daacad u ah Dowladda Federaalka ee uu hoggaamiyo Maxamed Cabdilaahi Farmaajo iyo Ciidammada Maamul-goboleedka Jubbaland, kuwaas oo isku-haleelay gudaha magaalada Beledxaawo oo ku taalla xuduudka u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya.
Sida ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters, marka laga yimaaddo khasaaraha soo gaadhay ciidamada dagaalku dhexmaray, waxa dagaalka ku geeriyooday 11 qof oo shacab ah halka 14 kalena ku dhaawacmeen, sida uu xaqiijiyey mid ka mid ah hawl-wadeennada cusbitaalka magaalada Beledxaawo.
Dagaalka oo la sheegay inuu bilowday gelinkii dambe ee xalay, waxa ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo Dhaawamac labada dhinac soo kala gaadhay, waxaana guul inay gaadheen ka sheegatay dowladda Soomaaliya oo sheegtay inay Maxaabiis badan ka qabatay ciidanka Maamul-goboleedka Jubbaland.
Labada dhinac ayaa midba ka kale ku eedeeyey bilowga dagaalka, balse waxa la ogyahay in degmada Beled-xaawo ay ku sugnaayeen Ciidammo ka tirsan kuwa Soomaaliya, halka ciidammada maamul-goboleedka Jubbaland ay fadhiisimo ku lahaayeen degaamo ku dhow magaalada.
Dowladda Soomaaliya, ayaa ku eedaysay dalka Kenya inay soo abaabushay Jabhad weerar ku qaadday degmada Beledxaawo, balse maamulka Jubbaland ayaa sheegay in jabhado dowladda Federaalka ahi soo abaabusay weerar ku qaadeen degmada Beledxaawo oo maamulkoodu ka taliyo, sida uu sheegay madaxweyne ku-xigeenka maamulkaas Maxamuud Sayid oo warbaahinta la hadlay.
Sheegashada Dowladda Soomaaliya
Wasiirka Warfaafinta ee Soomaaliya Cismaan Dubbe, ayaa sheegay inay magaalada Beled-xaawo soo weerareen malleeshiyaad la soo hubeeyey oo ay weheliyeen ciidammada Kenya ee ku sugan gudaha dalkaas si ay uga qabsadaan magaalada, balse ay ku guul-darraysteen.
Waxa uu ku dooday inay khasaare gaadhsiiyeen ciidamada maamulka Jubbaland, isla markaana ay gacanta kaga dhigeen 100 maxbuus. Balse ma jiraan warar madax-bannaan oo xaqiijinaya sheegashada dowladda Soomalaiya.
Jubbaland oo guul sheegatay
Dowlad-goboleedka Jubbaland, ayaa shaaciysay in ay gebi ahaanba gacanta ku dhigeen degmada Beledxaawo ee Gobolka Gedo oo muddooyinkii u dambeeyey khilaaf siyaasadeed ka taagnaa.
Sida uu baahiyey Telefishinka Jubaland, Ciidammada Milatariga Jubbaland ayaa si buuxda ula wareegay degmada Beledxaawo, kadib dagaal xooggan oo xalay iyo saaka halkaas ku dhexmaray iyaga iyo ciidammo deegaanka u dhashay oo daacad u ah Dowladda Federaalka Soomaaliya.
Maamulka Jubaland waxa uu sheegay in dhammaan Ciidamada Federaalka laga saaray degmada Beledxaawo, islamarkaana dagaalku uu haatan ka socdo duleedka magaalada, inkasta oo aanay faahfaahin ka bixin khasaaraha ka dhashay dagaalkaas.
Ilaa immika lama hayo warar madax-bannaan oo xaqiijinaya natiijada dagaalka labada dhinac dhexmaray iyo baaxadda khasaaraha ka dhashay oo la rumaysan yahay inay dad shacab ah iyo hanti burburtayba ku jiraan.
Kenya oo Dagaalka ka hadashay
Dowladda Kenya oo ka mid ah dalalka deriska la ah Soomaaliya ee Ciidammadoodu ka tirsan yahay xoogagga nabad-ilaalinta Midowga Afrika ee Soomaaliya, ayaa si dadban uga jawaabtay eedaymaha ay dowladda Farmaajo ugu jeedisay dagaalka ka dhacay degmada Baladxaawo.
Wasaaradda arrimaha dibedda Kenya ayaa qoraal ay u dirtay guddoomiyaha Midowga Afrika ku sheegtay inay aad uga walaacsan tahay dagaalka kasoo cusboonaaday xuduudda ay la leedahay Soomaaliya.
Kenya waxay sheegtay in dagaalka uu u muuqdo inuu u dhaxeeyo ciidamada dowladda fedeeraalka Soomaalia iyo kuwa maamulka Jubbaland, waxaanay walaac ka muujisay inuu dagaalku dhaliyo barakac ku yimaaddo dadka shacabka oo qaxoonti ahaan u gala gudaha dalka Kenya.
Farmaajo vs Axmed-Madoobe
Si kasta ha ahaatee, dagaalka ayaa ku soo beegmaya xilli dalkaasi diyaar-garow adag ugu jiro doorashada Baarlamaanka ee Beesha Caalamku dabada ka riixayso oo qabsoomiddeeda loo muddeeyey sannadkan gudihiisa. Waxaana jira khilaaf sii xoogaysanya oo u dhexeeya Dowladda Federaalka ee uu hoggaamiyo Farmaajo iyo maamulka Jubbaland ee uu hoggaamiyo Axmed Madoobe.
Gacan-ku-haynta maamulka Jubbaland ee degmada iyo aayo-ka-talinta deegaamada gobolka Gedo ee hoos yimaadda Jubbaland, ayaa noqotay xuddunta khilaaf siyaasadeed oo u dhexeeya madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe iyo Madaxweynaha dowladda Federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo oo Beeshiisu deggen tahay inta badan gobolka Gedo oo xilligan xuddun u noqday khilaafka u dhexeeya Maamulka Jubaland iyo Villa Somalia.
Faahfaahinta ku saabsan Sababta uu gobolka Gedo xuddunta ugu noqday Khilaafka u dhexeeya Maamulka Jubbaland iyo Dowladda Federaalka ee Soomaaliya, akhriso WARBIXINTAN oo ay diyaarisay Laanta Afka Soomaaliga ee BBC.